Ganzabee Dibaabaa fiigicha m5000 Carlsbad itti geggeeffame injifatte - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Ispoortii Atleetiksii Ganzabee Dibaabaa fiigicha m5000 Carlsbad itti geggeeffame injifatte
Atleetiin Oromoo Ganzabee Dibaabaa fiigicha m5000 Carlsbad, California itti geggeefame moo’atte. Ganzabeen fiigicha kana moo’achuu qofa osoo hintaane sa’aan isiin ittiin galtes baay’ee isa duraa irra fooyya’aa ture. Fiigicha kana Ganzabeen daqiiqaa 14:48 galuudhaan kan xumurte. Sa’aan kuni Ganzabee addunyaa irratti m5000 sa’aa kanaan xumure isa 2ffaa isii godha. Ganzabeen daqiiqaa 14:45 itti galteerti osoo ta’ee fiigicha mana keessaatiin rikoordii haarawa galmeessist ture. ganzabeen m5000 nama saffisa lammaffaatiin xumure ta’uudhaan maqaa isii galmee seenaa irra keetteerti.
Ganzabeen fiigicha mana keessatiin ammatti rikoordii afur harkaa qabdi. Fiigicha Carlsbad itti godhameen obboleettiin Ganzabee, Xurunesh Dibaabaa, bara 2005 daqiiqaa 14:51n ture kan xumurte.
Fiigicha Carlsbad kana irratti 1ffaa hanga 3ffaa ta’uudhaan kan xumuran atleetota Itoophiyaati. Galatee burqaa daqiiqaa 15:13 galuudhaan 2ffaa taatee yoo xumurte. Daqiiqaa 15:18 raawwachuudhaan 3ffaa kan taate Wuddee Ayaleewuuti.
Wolmorkii worra dhiiraa jiddutti Carlsbad itti geggeeffameen worri dhiiraa Itoophiyaa bakka bu’an sadarkaa 1ffaa – 10ffaa keessa seenuu hindandeenne.
Previous articleOb.Baqqalaa Garbaa mana hidhaatii bayuun isaa mirkanaaye
Next articleFilannoo Naayjeeriyaa: Muhaammaduu Buhaarii sagalee ummataan perezidaantii biyyattii angoo irraa buusan